राजन प्रसाद पोखरेल
भानुचोक निर पुगेपछी उस्ले मलाई छिटोछिटो जाउँ भन्यो। आपत परे जस्तो लागेर चोकको टोइलेट भित्र छिर्यो र मलाई पनि टोइलेट भित्र ईशारा गरेर बोलायो। पिशाब फेरी सकेपछी पनि उ टोइलेट भित्रै रोकियो र टोइलेटको दुलाबाट बाहिर चियाइरह्यो। मैले भनें, ‘किन, केभो, जाउँन, यहाँ त निकै दुर्गान्ध रहेछ।’ एकछिन पर्खिनुस्न, भनेर मलाई टोइलेट भित्रै रोक्यो।
धरानबाट सरुवा भएर काठमाडौं गएपछी धरान फर्केर नगएको पनि धेरै महिना भएको थियो। धरान उत्रेपछी म सटासट उस्कै डेरातर्फ लम्कें। झोला पनि बिसाउनु थियो। उसँग नभेटेको पनि निकै भएकोले उसलाई भेटन म आतुर थिएँ। पुतली लाइनमा भएको उस्को डेरामा पुग्दा उ डेरामा रहेनछ । उस्की श्रीमती र केटाकेटी रहेछन। “भाउजु, बिक्रम जि कता जानुभोत रु”भनेर सोधें । उनले भनिन,“बजारतिर निस्कनु भएको छ, आउने बेला पनि हुन लाग्यो।“
“ए,त्यसोभए मेरो यो झोला राखीदिनुस्, म एकछिन बजार तिर निस्कन्छु । भेट भयो भने सँगै आउछौं।“ उस्का श्वास्नी छोराछोरी अली निराश जस्ता देखिन्थे। सधैंझै प्रशन्न थिएनन्। भानुचोक हुँदै छाताचोक तर्फ जाँदा धरान बजार मलाई कत्तीपनि बिरानु जस्तो लागेन । सधैंझै भिडभाड र प्रफुल्ल मान्छेहरुको बिचमा फेरी एकचोटि मिसिन पाउदा रमाइलो लाग्यो । कसैले चिनेर बोलाउँछन् कि वा नजिकबाट चिनेका मान्छे भेटिन्छन् की भनेर म नियाल्दै हिडिरहेको थिएँ । समय अपरान्हको तीन बजेको हुँदो हो। मैले बिक्रमलाई फटाफट मास्तिर लाग्दै गरेको देखें । शायद मलाई देखेर भाग्न खोजेको होकि जस्तो पनि लाग्यो । अली छिटो लम्केर उस्को नजिकै पुगेर बोलाएँ । “बिक्रम जि, कता जाँदैहो ? ” उस्ले पुलुक्क फर्के रहेर्यो। “एहे, बिराजजि, तपाईं पो ? एकछिन मास्तिरसम्म पुगेर फर्कन्छु भनेर जाँदै गरेको। ल यहीबाट फर्क्यौं अब।“ हात मिलाएर अङालो मार्दै मैले सोधें, “ के छ हालखबर ? तपाईंसँग भेट नभएको त धेरै भोनि।“
“हो नि, म पनि तपाईंसँग भेटन ज्यादै उत्सुक थिएँ । खुशीलाग्यो।“ भानुचोक निर पुगेपछी उस्ले मलाई छिटोछिटो जाउँ भन्यो। आपत परे जस्तो लागेर चोकको टोइलेट भित्र छिर्यो र मलाई पनि टोइलेट भित्र ईशारा गरेर बोलायो। पिशाब फेरी सकेपछी पनि उ टोइलेट भित्रै रोकियो र टोइलेटको दुलाबाट बाहिर चियाइरह्यो। मैले भनें, ‘किन, केभो, जाउँन, यहाँ त निकै दुर्गान्ध रहेछ।’ एकछिन पर्खिनुस्न, भनेर मलाई टोइलेट भित्रै रोक्यो। बाहिर निस्केपछी मैले सोधें, ‘किन रोकिनु भयो त, त्यस्तो टोइलेट भित्र ? ‘केही होइन, मैले पैसा तिर्नुपर्ने मान्छेहरु झ्वाट्ट देखें, अप्ठारो पार्न सक्छन भनेर तर्केको नि, उनिहरु चढेको बस चलेपछि निस्कीहालियो नि।“ मैले मन्मनमा सोचें ‘ल यो मान्छेको ताल सुर उस्तै छअहिले पनि।’
उस्को डेरामा आइसकेपछी उस्की श्रीमतीले उ सँग रिसाउदै भनिन, ‘कहाँ जानुभाको थियो तपाईं ? छोराछोरी भोकाइसके, घरमा एक पैसो छैन। खानेकुरा केही छैन।’उस्ले मेरो अनुहार तिर हेर्यो । मैले कुरा बुझे जस्तो गरेर गोजिबाट पाँचसयको नोट निकालेर दिएँ । अनी उस्ले त्यो नोट श्रीमतीलाई थमाउँदै भन्यो, ‘ल खानेकुरा किनेर ल्याउ।’ होमवोर्क गर्दै गरेका उस्का छोराछोरीले भने, ‘बाबा, शुक्रबारसम्ममा फिस तिरेन भने जाँचदिन पाइदैन अरे।’ उस्ले भन्यो, ‘चिन्ता नगरन नानी हो, शुक्रबार आउन अझै पाँच दिन पो बाँकी छ त।’
उस्की श्रीमती किनमेल गर्न गएपछी मैले उसलाई खुसुक्क भनें, ‘आज बाहिरै बस्न जाउँ न,’ ‘कता ? ‘कोशी किनारतिर जाउँ, होटेलमा बसौं। यसो खानपिन पनि गरौंला। काठमाडौंको बसाइबाट दिक्क भएको छु म पनि। दुस्खसुखका कुरा गरौंला । भोली बिहान आइहालिन्छ, के भोत।“उस्ले भन्यो, ‘आफुसँग फुट्टी पैसा छैन, के खर्चले जानु ? म सँग छ नि भनेर मैले ढुक्क पारें।
नोट : अङ्रेजीमा चारवटा उपन्यासहरु बिदेशबाट प्रकाशन गरीसके पछी मलाई आफ्नो मात्रीभाषा नेपालीमा पनि केही उपन्यासहरु लेख्न मन लाग्यो। यो भन्दा अगाडि अटोग्राफनामक उपन्यास लेखेर प्रकाशन उन्मुख बनाइसकेपछि कोरोना छुट्टीको उपयोग गर्दै फेरी अर्को उपन्यास सुरु गरेको छु। पाठकहरुमा उत्सुकता जगाउनका लागि यस्का पनि केही अध्यायहरु फेस्बुक पोस्टमार्फत सार्वजनिक गर्दै जानेछु । यहाँहरुको उचित सुझावको अपेक्षा गर्दछु। प्रकाशन गर्ने बेलासम्ममा उपन्यासको नाम परिवर्तन हुन पनि सक्छ। (क्रमशः …..)